FAQs - Hangzhou Viewsheen Technology Co, Ltd.
Mitengo yedu inochinjika zvichienderana nekuwanikwa uye zvimwe zvinhu zvemusika. Isu tinokutumira iwe yakagadziridzwa yemutengo runyorwa mushure mekambani yako kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.Tinokupa iwe yemakwikwi mutengo rutsigiro.
Kwete, hatina odha shoma.
Hazvina mhosva kuti vangani, isu tinopa rubatsiro rwehunyanzvi kwauri.
Ehe, isu tinogona kupa akawanda magwaro anosanganisira ekutaurirana protocol, dhizaini gwaro, shandisa gwara.
Isu garandi yedu tekinoroji, zvishandiso uye kugadzirwa maitiro. Kuzvipira kwedu ndekwe kugutsikana kwako nezvigadzirwa zvedu. Muwarandi kana kwete, itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa nyaya dzese dzevatengi kugutsikana kwemunhu wese
Hongu, isu tinogara tichishandisa mhando yepamusoro kutumira kunze. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kuunza imwezve muripo.